ရွှေနဒီနည်းပညာဝေမျှခြင်း: Team viewerကိုအသုံးပြုကာ အခြားကွန်ပြူတာ အား မိမိကွန်ပြူတာမှ ထိန်းချုပ်ခြင်း(for computer)
Team viewerကိုအသုံးပြုကာ အခြားကွန်ပြူတာ အား မိမိကွန်ပြူတာမှ ထိန်းချုပ်ခြင်း(for computer)
အခုကွန်ပြူတာ တစ်လုံးနဲ. တစ်လုံးကို အင်တာနက်လိုင်း ရှိတာနဲ.တင် ချိတ်ပီးတော့ ၀င်သုံလို.ရနေပါပီ လိုအပ်တာကတော့ အောက်ကဆော့ဝဲလေး တစ်ခုပါပဲ ဒေါင်းလိုက်ပါ။
ဒေါင်းပီးရင် ကွန်ပြူတာ ထဲမှာ install လုပ်လိုက်ပါ။ပီးရင်တော့ ကလစ်နှိပ်ပီး ဖွင့်လိုက်ပါ
အပေါ်က ပုံလိုပဲ အိုင်ဒီ နဲ. ပက်ဝက်ကြလာပါလိမ့်မယ် ဘေးကဟာ ကတော့ မိမိကွန်ပြူတာရဲ. အိုင်ဒီ နဲ. ပက်ဝက်ပါ။ သူငယ်ဂျင်းတွေ တောင်းရင်ပေးရမဲ့ ဟာတွေပါ ။ ညာဘက်က ဟာကတော့ မိမိ နဲ. ဆက်သွယ်လိုတဲ့ ကွန်ပြူတာ ရဲ. id ပါ။ ကျွန်တော်က သူငယ်ဂျင်းတစ်ယောက်ရဲ. ကွန်ပြူတာကို ကျွန်တော့ ကွန်ပြူတာကနေ အမိန်.ပေးချင်တယ် ဆိုပါစို. သူ.ရဲ. id ကိုတောင်းလိုက်ပါမယ် သူကလဲ ဘယ်ဘက်ခြမ်းက အိုင်ဒီ နဲ. ပက်ဝက်ဘောက်စ်ထဲက နံပါတ်တွေကို ကျွန်တော့ကိုပေးရပါမယ် ။ ကျွန်တော်က ရလာတဲ့ အိုင်ဒီကို ညာဘက်က ဘောက်စ်ထဲကို ထည့်လိုက်ပါတယ် ပီးတော့ connect to partner ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ် ခဏနေရင် ပက်ဝက်တောင်းတဲ့ ဘောက်စ်လေး ကြလာပါလိမ့်မယ်
password နေရာမှာ မိမိသူငယ်ဂျင်းက ပေးထားတဲ့ ပက်ဝက်ကို password အထဲမှာ ရိုက်ပေးရမှာပါ ပီးရင်တော့ log on ကို ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါ။ခဏလောက်စောင့်လိုက်ပါ ခဏနေရင် အောက်ကလို ပုံလေး နဲ. မိမိသူငယ်ဂျင်း ရဲ. ကွန်ပြူတာ ထဲကို ၀င်ရောက်နိုင်ပါပီ
ပီးရင် တော့ ဟီးးး ကြိုက်သလို ကလိပေ့ါဗျာ ။ သူခွင့်ပြုရင်ပေါ့ ကဲစမ်းကြည့်လိုက်ကြပါ။ အဆင်မပြေရင် cbox မှာအော်သွားနိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ဒီဆော့ဝဲ အား ချိတ်ဆက်မည့်ကွန်ပြူတာ နှစ်လုံးစလုံးတွင် install လုပ်ထားရပါမည်
Posted by shwenadi at 10:54 PM
Labels: computer knowledges, computer softwares
lusoe bo January 20, 2013 at 4:07 AM
ကွန်ပြူတာ နှစ်လုံးစလုံးတွင် install လုပ်ထားပြီးပါပြီ။သူ့ စက်ကိုဝင်ကြည့်ရာမှာကိုယ့်အိုင်ဒီကောသူ့ ကိုပေးရမှာလားအကို။connect to partner ကိုနှိပ်တာမရဘူးဖြစ်နေတယ်။သူစက်ဖွင့်ထားလို့ မရတာလားအကို။နဲနဲလောက်ထပ်ရှင်းပြပေးပါနော်..လေးစားစွာဖြင့်
shwenadi March 5, 2013 at 1:51 AM
အင်း ဟုတ်တယ် နှစ်ခု စလုံးက အိုင်ဒီတွေကို အပြန်အလှန်ထည့်ပေးရမှာပါ။တစ်စက်က ဟာကို တစ်စက် လုပ်ပေးရပါမယ် အင်တာနက်ကော်နက်ရှင်တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။
htay March 2, 2014 at 1:26 AM
အဲဒီလို အိုင်ဒီတွေ password တွေမလိုပဲ ကြိုက်တဲ့အချိန် တဘက်မှာလဲ လူရှိစရာမလိုပဲ တခြားကွန်ပျူတာကို အွန်လိုင်းကနေ ဘယ်လိုကြည့်လို့ရနိုင်မလဲ သိချင်လို့ပါ
ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး PDF Reader များ
ကျွန်တော် ကြိုက်တာကတော့ ၂ ခုပဲရှိတယ် အဲ့တာတွေ ကတော့ Adobe Reader နဲ. Foxit Reader လေ ။ သုံးလို.ကလဲ အရမ်းကောင်းတယ် ။ အဲ့ထဲက foxit reader ကတေ...
Modern Combat 4: Zero Hour V1.0.4 Apk + OBB
Modern Combat Game လေးပါ။အရင်ကကွန်ပြူတာအတွက်ထွက်တယ်လေ။ကျွန်တော်ဆိုတနေကုန်ဆော.တာဗျ :D :D အရမ်းဆော.လို.ကောင်းတယ်လေ။ခုတော. Android အတွက်ပ...
Google Play Support Device List
ပြီးခဲ့ တဲ့ သောကြာနေ့ ကစတင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကနေGoogle Play Store ကို တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ပြီး Application များကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲ နိ...
Yanpaing Latt ပိုစ့်အား ပြန်လည် ကူးယူ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။(mmugမှ) အ၇င်က တခါေ၇းဘူးပေမဲ့ ပုံနဲ့ မတင်လိုက်၇တော့ သုံးတဲ့ သုံးတဲ့ သူတွေ သိပ်မ...
နည်းပညာစာအုပ်လေးတွေ တွေ.လို. ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် စာအုပ်လေးတွေ က အတော်ဖတ်လို.ကောင်းတယ်။ technology knowledges တွေ တိုးတာပေါ့နော် အောက်မှာ တ...
China tablet တွေအတွက် Firmware download ဆွဲဖို့လင့်လေးပါ။
China tablet တွေအတွက် Firmware download ဆွဲဖို့လင့်လေးပါ။ 1/ONDA VI30 Deluxe Firmware Dowload Android™ 4.0.3 ICS 8 inch Tablet PC Onda...
Plants vs. Zombies2(Game Of The Year Edition) (for computer)
နောက်ဆုံးထွက်လေးနော် မရမက ရှာထားရတာ ကွန်ပြူတာအတွက်ပါ Plants vs. Zombies2(Game Of The Year Edition) တော်တော် ကစားကောင်းလာတယ် ဟဲ ကစားချင်တဲ့...
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဆီလီကွန်တောင်ကြားက စတိဗ်ဂျော့ရဲ့  ဂိုထောင်လေးဟာ ကမ္ဘာ့ သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းတင် နေရာတစ်ခုအဖြစ် အသတ်မှတ်ခံလိုက်ရပါပြ...
JXD tablet များအား root လုပ်စရာမလိုဘဲ မြန်မာဖောင့်...
JXD tablet များအား firmware တင်ခြင်း(ကြာချိန် ၃ မိ...
Racing motoဆိုင်ကယ်ပြိုင်တဲ့ ဂိမ်းလေးပါ။(for andro...
Team viewerကိုအသုံးပြုကာ အခြားကွန်ပြူတာ အား မိမိကွ...
တစ်ကမ္ဘာလုံးက နေရာအနှံ.ကို ဖုန်းscreen ထဲက နေကြည့်မ...
jet audio(for android)
android phone and tabletတွေမှာdataတွေကိုlockချပေးတ...
android phone and tablet တွေကို root မလုပ်ဘဲ မြန်မ...
android phone and tablet တွေရဲ. ဘက်ထရီအားကို အချိန...
android phone and tablet အတွက် အမှိုက်ပုံးလေးပါ(fo...
Android phone and tabletတွေမှာ root လုပ်ပီးမပီး စမ...
Android downloaderများစုစည်းမှု. (၁)
blogကိုAndroid ဖုန်းထဲကနေ ရေးပီးပိုစ့်တင်မယ်(for a...
မိမိ Android ဖုန်းကိုi-phoneတစ်လုံး ဖြစ်အောင်လုပ်မ...
Christmas Tree လေးကို ကိုယ်တိုင် create လုပ်လို့ရတ...
Android phoneတွေနဲ. data recoveryလုပ်ပေးတဲ့ဆော့ဝဲ(...
Android phone and tablet တွေကို ဒုံးပျံကဲ့သို.မြန်...
ဘလော့တစ်ခုကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်းဖန်တီးမယ်(myanmar b...
facebook 2.0(for android)
website,blogspot တွေကို offline ဖတ်လို.ရအောင် ဒေါင...
Gmail အကောင့်အတွက် ဖုန်းမလိုတဲ့ နည်းလမ်းသစ်
mobile phone အတွက်apk ဖိုင်လေးတွေ ကို လွယ်လွယ်ကူကူ...
gpk ဖိုင်တွေကို Androidဖုန်းထဲမှာ ဒေါင်းဖို.အတွက် ...
Huawei phone များကို ကွန်ပြူတာနှင့် usb cableအသုံး...
mediafire express portable လေးပါ။
Huawei all in one driver လေးပါ။
ဖေ့ဘွတ်ဟက်သောဆော့ဝဲ (for android)